सोमबारको राशीफल : तपाईको भाग्य कत्तिको बलियो छ आज ? हेर्नुस्:: Artha Dabali
सोमबारको राशीफल : तपाईको भाग्य कत्तिको बलियो छ आज ? हेर्नुस्
आज वि.सं. २०७६ असार ९ गते सोमबार तदनुसार ई.सं. २०१९ जुन २४ तारिख । आषाढ कृष्ण सप्तमी ।
मेष राशी (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ)
मेहनत गर्नुपर्दछ जे काम गर्दा पनि सफलता मिल्नेछ । पराक्रम र प्रसिद्धी बढ्नेछ । देवालय मठमन्दिर वा धार्मिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रतर्फको काममा सहभागी हुनुपर्नेछ ।
नोकरी गर्नेले मानसम्मान पाइनेछ । विश्वासको वातावरण बन्नेछ । रमाइलो पारिवारिक वातावरण बन्नेछ । विद्यार्थीहरुको पढाइमा मन जानेछ । आथित्यपूर्ण समय छ । व्यापार व्यवसायमा लाभ हुनेछ । व्यवासाय विस्तारका लागि राम्रो समय छ । मेष राशी हुनेहरुको लागि आज शुभ रंग कालो र शुभ अंक ३ रहेको छ ।
वृष राशी (इ, उ, ए, ओ, बो, बु, बे, बो)
स्वास्थ्य सबल छ । काम गर्ने जाँगर बढ्नेछ । सखुसमृद्धीमा वृद्धि हुनेछ । काममा सोचेजस्तो सफलता मिल्नेछ । उन्नती गर्ने अवसर प्राप्त हुने योग छ । नयाँ रोजगारी प्राप्त हुने समय छ ।
व्यापार व्यवसायमा साचेजेति लाभ मिल्नेछ । वुवाआमो स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ । आफ्नो क्षेत्रमा साख रहनेछ । परिवारिक वातावरण सुमधुर हुनेछ । रोकिएका काम बन्नेछ । यस राशी हुनेहरुका लागि आज शुभ रंग ध्वाँसे शुभ अंक ६ रहेको छ ।
मिथुन राशी (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह)
परोपकारी र दानपुण्यका काममा खट्नु पर्नेछ । सानो प्रयासले ठूलो काम बन्नेछ । धार्मिक तीर्थस्थलहरुको भम्रण हुनसक्छ । बौद्धिक क्षेत्रमा गरेका प्रयास सफल हुनेछ । व्यापार व्यवसाय फस्टाउनेछ । आम्दानीमा कमी हुनेछैन । सानो प्रयासले रोकिएको काम बन्नेछ । पारामार्थिक काममा खट्ने पर्नेछ। रोकिएका काम बन्नेछन् ।
नयाँ काम र रोजगारी हात पार्ने समय छ । प्रसिद्धी कमाउने र नाम राख्ने काममा मन जानेछ । सानो प्रयासले भाग्यबल वृद्धि गर्ने समय छ । सामाजिक र परोपकारी क्षेत्रमा लगानी गर्ने समय छ । यस राशी हुनेहरुका लागि आज शुभ रगं सेतो वा पहेलो शुभ अंक ५ रहेको छ ।
कर्कट राशी (हि, हु, हो, डा, डि, डु, डे, डो)
विद्यार्थीको कडा परिश्रम खेर जानसक्छ । हाकिम वा ठुलाबडासँग चित्त नबुझ्न सक्छ । बोलीमा संयमता अपनाउनुपर्छ । आज बोलेको कुराले विपरित अर्थ लाग्नेछ । आज कसैले पनि नयाँ साथीभाइले तुरुन्त विश्वास गर्नुहुँदैन ।
सामाजिक र परोपकारका क्षेत्रमा अवरोध आउन सक्छ । भाग्यबलमा कमी भएको महसुस हुनेछ । व्यपार र रोजगारीमा मेहनत गर्दा मात्रै सफलता प्राप्त हुनेछ । प्रमेसम्बन्धमा पनि निराशा छ यद्यपि आज दिउँसोबाट भने निराशा कम हुनेछ । यस राशी हुनेहरुको लागि आज शुभ रंग कालो र शुभ अंक ८ रहेको छ ।
सिंह राशी (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु टे)
मन रोमान्टिक र भावुक बन्नेछ । दिन मनोरञ्जनपूर्ण रहेको छ । नयाँ ज्ञान सिक्ने र पढाइमा प्रगति हुनेछ । घुमघाम र भेटघाटमा समय बित्नेछ । काम गर्ने जाँगर बढ्दै जानेछ । विलासिताका क्षेत्रमा खर्च बढ्नसक्छ । व्यवसायमा यात्राको सम्भावना छ । दाम्पत्य सुख छ । छोटो दुरीको यात्रा हुनेछ । विना प्रतिस्पर्धा फाइदा हुने योग छ ।
गरिएका कामको उचित प्रतिफल पाइनेछ । सहयोगीहरुले साथ दिनेछन् । आम्दानी बढ्नेछ । आत्मबल बढ्नेछ । शैक्षिक प्रगतिको समय छ । ज्ञान र चिन्तन उपयोगी बन्न सक्छ । बेलुकी जिम्मेवारी बोध हुनेछ । रमाइलो त्यागेर काम सुरु गर्ने समय छ । सिंह राशी हुनेहरुको लागि आज शुभ रंग गुलाबी वा सिन्दुरे र शुभ अंक ७ रहेको छ ।
कन्या राशी (टो, प, पी, पु, ष, ण ठ, पे, पो)
लामो समयदेखि रोकिएका काम बन्ने मौका छ । आकस्मिक रुपमा निम्तोमा सहभागी हुने सम्भावना छ । मिष्ठान्न भोजनको अवसर आउनेछ । तर खानामा सचेत हुनुहोला । प्रतिस्पर्धा, तर्क वा विवादको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त हुनेछ । घरायासी सुखसुविधाका सामान किन्न मन लाग्नेछ । यात्रा लाभप्रद रहेको छ तर धेरै टाढा जानुपर्दैन ।
मान सम्मान र प्रतिष्ठा वृद्धि हुनेछ । आजको लगानी र विनियोजनले उत्तरोत्तरफाइदा हुनेछ । यस राशी हुनेहरुको लागि आज शुभ रंग हलुका सेतो र शुभ अंक ६ रहेको छ ।
तुला राशी (र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते)
आत्मबल वृछि हुनेछ विद्यार्थीले पढाइमा ध्यान दिनु राम्रो हुनेछ । आजको ज्ञान र चिन्तन उपयोगी बन्नेछ । जागिरेको मान प्रतिष्ठामा वृछि हुनेछ । व्यापार व्यवासयबाट लाभ रहेको छ ।
सुखद समाचारले उत्साह थप्नेछ । प्रेम सम्बन्ध सुमधुर हुनेछ । रचनात्मक काम गर्ने समय छ । नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ । पारिवपारिक सुख बढ्नेछ । यस राशी हुनेहरुको लागि आज शुभ रंग गाढा नीलो र शुभ अंक १ रहेको छ ।
वृश्चिक राशी (तो, ना, नि, नु, ने, या, यि, यु)
विवाद, झगडा मा नपरेको राम्रो हुनेछ । मान्यजन तथा विशिष्ट व्यक्तिसँगको छलफलमा लाभ मिल्नेछ । स्वास्थ्य सबल छ । प्रेम सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध राम्रो छ ।
दिनको सुरुवातमा आलस्य र थकानको महसुस भए पनि आज उल्लासको वातावरणमा समय बितनेछ । आम्दानीका नयाँ स्रोत देखापर्नेछ । परदेशमा बस्नेहले खानपिन र रमाइलोमा खर्च गर्नेछ । यस राशी हुनेहरुको लागि आज शुभ रंग रातो वा पहेलो र शुभ अंक ४ रहेको छ ।
धनु राशी (ये, यो, भ, भी, भू, ध, फा, ढ, भे)
पराक्रम र प्रसिद्धी बढाउने समय छ तसैले सानातिना काममा अल्झिनु हुँदैन । बन्धुबान्धव, साथीभाइ र आफन्तबाट उत्कृष्ट सहयोगको आशा गर्न सकिनछ । भोजभतेर र खानपिन जस्ता सामाजिक कार्यमा सहभागी बन्नुपर्नेछ ।
दीर्घकालिन फाइदाको काममा सफलता मिल्नेछ । आम्दानी बढ्नेछ । झगडा र विवादमा विजयी होइने छ तर बोलीमा कडापन त्यागेको राम्रो । पारिवारिक जीवन सन्तोषप्रद रहेको छ । यस राशी हुनेहरुको लागि आज शुभ रंग गाढा नीलोे र शुभ अंक ३ रहेको छ ।
मकर राशी (भो, ज, जी, खि, खु, खे, खो, गा, गी)
मिष्ठान्न भोजन मिलनेछ । बोलीको प्रभाव बढ्नेछ । अरुलाई प्रभावित पारेर काम बनाउने समय हो । राम्रो फाइदाको योग छ । प्रशंसकहरु बढ्नेछन् । सहयोगीहले काममा साथ दिनेछन् । व्यापार व्यवसायमा राम्रो छ । लगानीको वातावरण बन्नेछ । कारोबारमा सुधार आउनेछ । राम्रो फाइदाको योग छ । रोकिएको काम सम्पादन हुनेछ ।
विगतको श्रमबाट प्रशस्त धन लाभ हुनेछ । बोलीको भरमा किर्तीमानी काम गर्ने समय छ । दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने समय छ । प्रतिष्ठित काम काम गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जनमाउन सकिनेछ । सामाजिक दायित्व बढ्नेछ । प्रतियोगितामा सफल होइनेछ । यस राशी हुनेहरुको लागि आज शुभ रंग घिउ रंग शुभ अंक २ रहेको छ ।
कुम्भ राशी (गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द)
मनमा उत्साह, उमंग र चञ्चलता देखिनेछ । इच्छाशक्ति बढ्ने हुँदा प्रयत्न गरेको काम छोटो समयमा गर्न सकिनेछ । नयाँ कामका लागि अवसर आउनेछ । निर्माण तथा व्यवहारिक काममा मन आकर्षित हुनेछ । दैनिक कामकाज सजिलै सम्पादन हुनेछन् । आफन्त र साथीसँग भेटघाट र रमाइलो गर्नेछ । परम्परालाई समय सापेक्ष परिवर्तन गर्न सकिनेछ ।
विशेष समारोहमा सहयभागी भइनेछ । प्रतिष्ठा मान सम्मान आदि पाइनेछ । परिवारजनसँग आत्मियता बढ्नेछ । प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिएला । कामबाट पनि फुर्सद पाइएला । प्रशंसकहरु बढ्नेछ । आत्मश्विास बढ्नेछ । स्वादिष्ट भोजनको अवसर आउनेछट । मनपर्ने वस्तु अलंकार आदि उपाहार पाइनेछ । अध्यनयमा प्रगति हुनेछ । राम्रो नतिजा हात पार्ने समय छ । यस राशी हुनेहरुका लागि आज शुभ रंग सिन्दुरे रातो र शुभ अंक ९ रहेको छ ।
मिन राशी (दी, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, ची)
आर्थिक समस्याले सकंट निम्त्याउनेछ । तर साँझपद उत्साह र उमंगमा वृद्धि हुनेछ । आज दिनभर धनको कारोबारमा सतर्क रहनु राम्रो हुनेछ । अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च बढ्नेछ । विवाद र झगडामा समय बित्न सक्छ ।
व्यापार व्यवसायमा फाइदा छैन । परिवारका कुनै सदस्यको स्वास्थ्यले चिन्ता थप्नेछ । साँझपख रमाइलो र विलासितामा मन रमाउनेछ । कुनै दिर्घकालिन योजना पूरा गर्न राती अवेर वा भोलीदेखि मात्रै सहज हुने देखिन्छ । शुभ रंग गाढा वा सेतो वैजनी र शुभ अंक ४ रहेको छ ।